Ị kpọghee ekwt Your Self Improvement Power - News Ọchịchị
Ị kpọghee ekwt Your Self Improvement Power
Mgbe anyị anya na a ụfọdụ ihe, a sere ihe atụ anyị ga-enwe ike ịghọta ihe bụ ihe dị n'ime ya, ihe na-ese na ihe ọzọ na-aga na ya ma ọ bụrụ na ihe osise bụ nnọọ ihe buru ibu dị sentimita n'ebe anyị ihu. Ma ọ bụrụ na anyị na-agbalị iji ya a obere n'ihu, Weill nwere a ghọtakwuo ọhụụ nke dum art ọrụ.
Anyị na-eru a ná ndụ anyị mgbe anyị dị njikere maka mgbanwe na a dum ụyọkọ nke ọmụma nke ga-enyere anyị Ị kpọghee ekwt anyị onwe mmelite mma ike. Tupu mgbe ahụ, ihe nwere ike ịbụ akasiakde anyị nri n'okpuru imi anyị ma anyị donít-ahụ ya. Naanị oge anyị na-eche nke e ji akpọchi anyị onwe mmelite mma ike bụ mgbe ihe nile nwetara kasị njọ. Were frog ụkpụrụ atụ
Gbalịa ịtụkwasị Frog A na ite nke esi mmiri. Kedu ihe na-eme? ọ twerps! Ọ jumps anya! Gịnị mere? N'ihi na ọ gaghị enwe ike ịgbachi nkịtị ka Mgbanwe mberede ya gburugburu ebe obibi na mmiri si okpomọkụ. Ahụ na-agbalị Frog B: -edebe onye a Luk mmiri ọkụ, mgbe ahụ-atụgharị na gas afụnwu ọkụ on. Chere til mmiri esịmde a ụfọdụ ịgbọ agbọ. Frog B mgbe ahụ na-eche ìOohÖ itís a bit ọkụ na hereî.
Ndị mmadụ na-dị ka Frog B n'ozuzu. taa, Anna-eche Carl kpọrọ asị asị ya. echi, Patrick na-ejegharị ruo ya ma gwa ya ọ kpọrọ asị asị ya. Anna mụ n'otu na doesnít uche ya ihe ndị enyi ya na-ekwu,. Ụbọchị na-esote, ọ nụrụ na Kim na John na-kpọrọ asị ya. Anna doesnít-aghọta ozugbo na ọ dị mkpa na mkpa onwe mmelite mma ruo mgbe obodo dum kpọrọ asị asị ya.
Anyị na-amụta anyị ihe mgbe anyị na-enwe ihe mgbu. Anyị mesịrị na-ahụ ịdọ aka ná ntị ịrịba ama na n'ókè mgbe ihe siri ike ma na ihe siri ike. Olee mgbe anyị aghọta na anyị kwesịrị ịgbanwe ihe diets? Mgbe onye ọ bụla nke anyị jeans na Chiefs ga-dabara anyị. Olee mgbe anyị akwụsị iri nri candies na chọkọletị? Mgbe ihe niile anyị na ezé adawo anya. Olee mgbe anyị na-aghọta na anyị kwesịrị ịkwụsị ise sịga? Mgbe anyị na akpa ume na-arahụ ọjọọ. Olee mgbe anyị kpee ekpere ma rịọ maka enyemaka? Mgbe anyị na-aghọta na weíre agbarapụ anwụ echi.
Naanị oge ọtụtụ n'ime anyị mgbe na-amụta banyere akpọchi anyị onwe mmelite mma ike bụ mgbe ụwa dum n'iyi na-ada iche. Anyị na-eche ma na-eche otú ahụ maka na ọ dịghị mfe ịgbanwe. Ma mgbanwe na-aghọ ihe na-egbu mgbu mgbe anyị ileghara ya anya.
Change ga-eme, dị ka ya ma ọ bụ ya asị. N'otu ebe ma ọ bụ ọzọ, anyị na-niile na-aga na-enweta dị iche iche gbanwere ihe ná ndụ anyị n na anyị na-niile aga emecha Ị kpọghee ekwt anyị onwe mmelite mma ike ọ bụghị n'ihi na ụwa na-ekwu, n'ihi ya,, ọ bụghị n'ihi na ndị enyi anyị na-enye nsogbu anyị, kama n'ihi na anyị ghọtara ya maka ọdịmma anyị.
Obi ụtọ ndị mmadụ donít dị nnọọ na-anabata mgbanwe, ha na-anabata ya. Ugbu a, ị donít-enwe obi a ezigbo okpomọkụ tupu ifiọkde mkpa njide onwe onye mma. Ịkpọghe gị onwe mmelite mma ike pụtara akpọchi onwe gị elu na onu nke echiche na ìits dị nnọọ ka m amî. Ọ bụ ndị dị otú ahụ a ogbenye mgbaghara maka ihe ndị na-atụ egwu na-eguzogide mgbanwe. Ọtụtụ n'ime anyị usoro uche anyị dị ka kọmputa.
Jen ugboro ugboro na-agwa onye ọ bụla na ọ doesnít nwere ikike idi na gburugburu iche iche nke ndị. Ọ nụrụ mgbe mama ya, papa ya, nwanne ya nwaanyị, onye nkụzi ya na-agwa otu ihe banyere ya ndị ọzọ. N'ime afọ, nke ahụ bụ ihe Jen kwere. O kweere na ya ya akụkọ. Na ihe na-eme? Oge ọ bụla a oké ìgwè mmadụ ga usu ndi nāpunara madu ihe n'ụlọ ha, na ụlọ akwụkwọ, na n'ógbè n o yiri ka ọ na kwụpụ azụ, ezere na igbachi onwe ya n'ime ụlọ. Jen didnít naanị kwere na ya akụkọ, o bi ya.
Jen nwere na-aghọta na ọ bụghị ihe ọ di na akụkọ. Kama nke nwere ya akụkọ post gburugburu ya ihu maka onye ọ bụla icheta, o nwere inwe mmụọ na show ndị Abụọ onwem onye dị mkpa onye na m ga na-emeso ya!m
Self mma nwere ike ọ gaghị abụ everybodyís ọkacha mmasị okwu, ma ọ bụrụ na anyị anya na ihe ndị a dị iche iche si ele ihe anya, anyị wee dị ukwuu Ohere nke inweta dum usoro kama na-agụta ụbọchị anyị ruo mgbe anyị-n'ụzọ zuru ezu mma. Atọ sessions na a izu a na-amụ ga-ka a mma ndụ, ịgụ akwụkwọ kama na-achọ na porns ga-enwe mmetụta elu a gbara ọkpụrụkpụ karị ihe ọmụma, -aga na ndị enyi na ndị ọgbọ ga-enyere gị na-a nzọụkwụ lọtara ọrụ na tụsaratụ. Na dị nnọọ mgbe ị na-anụ ụtọ dum usoro ji akpọchi gị onwe mmelite mma ike, youíll aghọta na youíre amalitele iwere ihe ìhè ma na-enwe obi ụtọ.
← 2015: bụ afọ mkpisiaka ihe mmetụta kwụsị ịbụ a gimmick ga- 2016 -abụ afọ mebere eziokwu Ịgba Cha Cha amalite? →